FAALLO: Guusha iyo Guuldarada Baarlamaanka | Maanta Online
Home / Faallo / FAALLO: Guusha iyo Guuldarada Baarlamaanka
FAALLO: Guusha iyo Guuldarada Baarlamaanka
Posted by: admin in Faallo December 3, 2016	Comments Off on FAALLO: Guusha iyo Guuldarada Baarlamaanka 528 Views
Guuldaradaada oo aad qirato waa geesinimo iyo isku kalsoonaan, Guuldarada oo aad ka dhuumato dafirto oo aad eedeeda cid kale saartaana waa fulaynio iyo Kalsooni xumo.
Qof kasta oo adduunka korkiisa tartamaa, laba arrimood ayuu mid sugayaa inuu noqdo kan guuleystey oo ku xiran dedaalkiisa iyo is diyaarintiisa, inuu noqdo kan laga guuleystay oo ay keentaa in laga dedaal iyo nasiib bato.
Muddo afar sano ah dadku waxay maqlayeen, arkayeen oo ay u soo joogeen, dhegxumo, Afxumo iyo dhaqamo badan oo aan qalbigoodu jeclaysan sida: “Mooshin, Buuq, Amardiido, Go’aan Beeleed la taageero iyo mid Qaran oo la diido,Qaab daro Maalin walba soo Taagan”.
Waxay xildhibaanada qaarkood u dhaqmayeen si anshaxa iyo asluubta masuuliyada iyo siyaasinimo khilaafsan. Waxay ogaayeen in aanay jirin cid la xisaabtami karta waqtigaa, laakiin waxay ka hilmaameen oo aan xisaabtaba ugu jirin , in ay mar’uun talada ku soo noqon doonto Shacabkii ay mataleen ee dirsaday shalay inay ku metelaan.
Xildhibaannada qaarkood waxay ku caanbaxeen, dalxiis, tumasho iyo baashaal, iyagoo aan xil iska saarin, deegaankii iyo dadkii soo doortey kana dhigay jaranjaro lagu gaaro jagada xildhibaanimo, sidoo kalena dantii guud ee dalka waxay ka dhigteen mid ay u adeegsadaan aqoonsiga xildhibaanimo iyo adeegsiga xasaanada la siiyey.
Xaalkoodku wuxuu noqday “ Meeshii Cir laga sugayaa ceeryaamo ka timid” waa duni iyo xaalkeed la mood noqonse waaye, Xildhibaankii la rabay inuu shacabka metelo, dalka 25ka sano burbursanaa, nidaam iyo sharcidejiye u noqdo, dadka iyo dowladda is baro oo isku xiro si ay u timaado kalsooni iyo dowlad laysku raacsan yahay.
Arrinkaasi ma dhicine nin weliba dhuuntiisa iyo dhanxanagiisa wax mara ayuu ka doorbiday, dadkii shalay isu heelanaa ee hilowga isu qabanayna waa la kala haatiyey. Waxay u qalab qaateen kala geeynta beelihii dagaallada sokeeye shalay ku kala tegey.
Waxay ilaaween in Beelaha ay magacooda ku joogaan kuna daaqayaan aysan ahayn kuwa ugu garaadka iyo aqoonta badan ee ay ka buuxaan, kumanyaal iyaga dhan walba ka mudan, aqoon, garaad, karti, waddaniyad iyo xirfadba, kuwaasoo leh heer kasta aqooneed.
Waxaa beel walba ku jira, dad aqoonyahano ah, Garaadbadan oo waayo arag ah, Aamin ah, Culumo intaba.
Doqon nasiibku u hiiliyey inay dad ugu saraysey is moodaaye, xildhibaannadii waa is bideeen, qaarkoodna waxaadba moodaa in kursi dhaxaltooyo oo looga dhintey uu yahay, waa kuwii ilaa Carta soo fadhiyey.
Hadda Bulshadii iyo beelihii Soomaaliyeed waa baraarugeen, waana tashadeen, waxayna doorbideen in nin walba miisaan la saaro, hadduu wanaag kasbadayna lagu karaameeyo, hadduu xumaan kasbadayna xilka laga wareejiyo.
Doorashada maanta way ka gedisan tahay kuwii shalay, waxaa laga codeynayaa lix Gobo loo kala duwan, Xildhibaan walba waxaa u codeynaya, ergo uu soo xulay Ugaaskiisa iyo nabaddoonadiisa, kuwaasoo ka kooban 51 ergey oo ka kala socda jufooyinka ku midaysan kursigaas. Waxaa qosol leh ninkii kalsooni ka waaya beeshiisa inuu eeda la korey cid kale oo intooda badan ay dhaliisha saareen Madaxweynaha iyo taageerayaashiisa, ogow beesha kursigeedii lagama qaadin ee qof kale ayaa yimid, ama kii joogay ayaa helay kalsoonida beeshiisa, mid walba oo laga guuleystay wuxuu ku andacoonayaa waxaan usoo bixi waayey waxaa I diidan Villa Somalia ama Madaxweyne Xasan sheekh.
Cid walbana way u jeedaa inaanu Xasan sheekh goobta tagin, gacantana kor u taagin, Sanduuqna warqad ku ridin si uu u codeeyo, siyaasi hebelna u rido, mid kalana u soo saaro, waxaa codka bixiyay 51 qof oo ku heyb ah siyaasiga . Taasina Waa Arin inay ku cibro qaataan uga baahan.
Ugu dambayn waxaynu sugeynaa, doorasho inay dhacdo, gudoon baarlamaan la doorto, ka dibna madaxweyne, ilaa ay ka dhammaato waxaan leeyahay, nin weliba guusha iyo guuldarada ha ogolaado, hana ku kalsoonaado nasiibkiisa “ Maalin weliba ciid maaha”.
Bulshadana waxaan leeyahay, nin weliba wuxuu geedkuu beertay mirihiisa hala siiyo, kii wanaagsanaa wanaag haloogu beddelo, kii xumaana bulshada hala weeciyo.
W/Q: Cabdullaahi Ibraahin (Daamey)
Previous: Baarlamaanka Jubaland oo la horgeeyay mooshin ka dhan ah Maxamuud Sayid Aadan
Next: Madaxweyne Xassan oo loo qaaday hees layaab leh “Waxay kaa eegayaan wax aadan adigu aqoon” (Daawo)